Nwere ike ịzụta spoons na-edozi ahụ | Akụkọ akụrụngwa
Lift Lab bụ aha ụlọ ọrụ ahaziri ma mepụta ya spoons na-edozi ahụ maka ndị ọrịa Parkinson, ngwaahịa nke ga-eme ka ịrụ ọrụ dị mfe dị ka iri nri, mana n'ihi ọrịa ahụ, ọ na-amanye anyị ịdabere na ndị ọzọ n'ọnọdụ ndị kachasị njọ.
Nnipa a wɔwɔ Liftware spo mu no ani gye ho sɛ wobenya daa nkwa wɔ Parkinson. Ngaji a nwere akụrụngwa nke na-enyocha mmegharị nke aka onye ọrịa na belata ha site na 76%. Aghugho bu na aru ngaji na akwaga otu onodu na otu uzo ahu dika aka mmadu ma na uzo ozo, otu a ka eji akwụ ha ụgwọ ma ngaji ahu nokwa.
Mgbe Google nwetara ya, Lift Lab kwuputara na ọrịre spoons Liftware amalitela. Pricegwọ ya bụ 295 dollar Ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ dị ntakịrị, ọ bara ha uru iji meziwanye ndụ onye nwere ọrịa Parkinson. Buru n'uche na na mgbakwunye na ịbụ ngwaahịa nke enyemaka ndị ọrụ aka, ọ na-enyekwa azịza dị oke elu na ọkwa teknụzụ n'ime ngalaba ngwaahịa orthopedic.
Nnyocha na-ekpughe na enwere 1 ugbu aMmadụ nde 0 n'ime ụwa ndị nwere ike ịta ahụhụ site na ịma jijiji na ọrịa Parkinson, yabụ, ngaji Liftware ghọrọ ihe ga-enwerịrị maka ha niile. Ihe doro anya bụ na mgbe ejiri teknụzụ mee ka ndụ ụmụ mmadụ ka mma, ihe dị ịtụnanya dịka nke a na-apụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Eresị ndị na-eme ka ahụ ike maka ndị ọrịa Parkin rere
ebee ka m ga-ahụ ngaji ebugharị ecuador
Zaghachi luis paz villarroel
Ebee ka m nwere ike nweta ha na Mexico?
Ebee inweta ya na Argentina
ABI M SITE MEXICO M AHuriri M Bzụta Ebe M Ga-enweta Ya
Ndewo, enwere m ngaji maka ọrịre nke m zụtara n'aka nna m ma ọ chọghị iji ya, nke ọhụrụ a, ị nwere ike ịkpọtụrụ m ma ịchọrọ ya, ekele, m nọ na Spain
Ndewo, enwere m mmasị, anọ m na Mexico
Ndewo Roberto, m ka hụrụ mgbasa ozi a ma achọrọ m ịma ma ị ka nwere ngaji nke na-eme ka ịma jijiji na ọnụahịa kwụsị. M bi na madrid
Ndepụta ndị ahọpụtara maka nturuugo egwu